Companylọ ọrụ # 1 Renewable Robotics Company, #KeepBelieving - Kimroy Bailey Group®
Anabata gị na KB GROUP® |
Mahadum Trott Bailey®
'Slọ ọrụ Robotics # 1 nke Renewable Robotics, #KeepBelievingKimroy Bailey2020-05-14T15:18:32-05:00
#WA # 1 RENEWABLE ROBOTICS COMPANY
KB Group na - ejikọ Renewable Energy & Robotics
# 1 AKW ONKWỌ N’ ONBLINE N’LINELỌ
Stepkwụ na larkwụ Solar - Ọzụzụ Nwụnye kachasị mma
LWA KWES WORLDR 24 UWA 7/XNUMX
Oge obula, Ebe obula. Anyị bụ ndị a nanị pịa
Kimroy Bailey Group nke Companieslọ ọrụ
#Lọ ọrụ # 1 a ga-eme ka mmegharia ume na Robotics dị n'ụwa niile!
Kimroy Bailey Otu
Kimroy Bailey Ntughari
Kimroy Bailey Group bụ nnukwu ụlọ ọrụ ijeri dollar na ụwa na nnukwu ọzụzụ mmekọrịta ụwa, Nlekọta Usoro Azụmaahịa, ationlọ Ọrụ Nkwado na Ngwá Ọrụ maka Industrylọ Ọrụ Na-ahụ Maka Robotics. Ndị otu KB na-ejikọ ọnụnọ ike mmeghari ohuru na Robotics na ọgụgụ isi. Otu a na-arụ ọrụ ugbu a na Istanbul, Barcelona, ​​Hong Kong, Guangzhou, New Dehli, Hamburg, Zurich, Miami na Manchester. Ka anyị na-aga n’ihu na-eto ọrụ anyị zuru ụwa ọnụ ebumnuche anyị abụghị inwe ‘BIG’, anyị chọrọ ka ọ dị ka obere ụlọ ọrụ na-agafe okporo ụzọ ebe ị nwere ike ịwụ elu na weebụsaịtị ha, bido mkparịta ụka ma nweta nzaghachi ozugbo. Ndi Kimroy Bailey Group nke Ndi otu nwere Kimroy, nwunye ya mara mma Sherika na ezigbo nwa ha, Keilah Bailey. Ndị Baileys ji nganga kwere na Popsie (Chukwu) na ike nke Ọbara nke Jizọs Kraịst.
Kimroy Bailey Renewables bụ onye na - eweta ụwa kachasị enyem aka nke ndị nkuzi Ọzụzụ Ntanetịaka, Nhazi Azụmaahịa, Ndụmọdụ na Ekwentị Mkpanaaka & Egwuregwu maka Mmeghari Ike Mmegharị. Na Larkwụ na larkwụ Solar ọzụzụ ọzụzụ n'ịntanetị agbaalala ka ọ bụrụ # 1 na-ere ahịa ịntanetị maka ihe dị mfe na usoro ahụ jikọtara ụmụ akwụkwọ na ndị ahịa. Anyị maara na ị debanyeghị akwụkwọ maka iji kọọ asambodo na mgbidi gị, ị na-amụ ịmụba ego ị na-akpata! Ebee ka ọ dị mma irite karịa site na ụlọ ọrụ nrụpụta Ntugharị Ike Nke Na-ahụ Maka Nweta? Ewezuga Antarctica, Nzọụkwụ Solar zụrụ ụmụ akwụkwọ na kọntinent ọ bụla! KB Renewables mepụtara ahịrị nke ngwaahịa Renewable Energy Products tinyere Robotic Wind Turbine nke nwere ike ime ka ike dị na ikuku dị ala na enweghị ikuku ikuku na foto SolarMoon nke nwere ike ị nweta ike ehihie na abalị.
Kimroy Bailey Robotics bụ onye kachasị ewulite ụwa nke robots agụmakwụkwọ nke nwere ike ịkụziri Sayensị, Nkà na ụzụ, Injinia na Mgbakọ mgbakọ na ọ aụ, nke bara uru ma na-ewu ewu. Na Rasta Robot bu KB Robotics flagship nke nwere ihe omuma dika Rasta Njem uwa, Rasta na akuzi otutu asusu, mmekorita umu akwukwo nke uwa na nkwado ulo akwukwo nke uwa site na Akwụkwọ nlekọta Rasta Robot Mmemme. Kimroy Bailey Robotics na-enyekwa Ọrụ Omume Robotics nke a na - enyere ụlọ ọrụ bulie ndị ọbịa ahụmịhe na ihe omume ha na ihe ngosi nka nke robot ụwa.
Zụta ngwugwu Wow Robotics US $ 100,000
Zụta ngwugwu KaPow Robotics US $ 1,000,000
KaPow KaPow Robotics US $ 10,000,000
Hotel SUPER Solar 65kW & Batrị Ndabere
Mlọ nkwari akụ MEGA Solar 45kW & Nkwado Batrị
Talọ oriri na ọ Mụ Mụ MEGA Starter Solar System 20kW
MEGA Ike Gbanyụọ-Grid Solar 6.6kW Kit
Ultra Power Off-Grid Solar 12.4kW kit
Ultra Starter Off-Grid Solar 5kW Kit
OMUNUKA TRITT BAILEY UN
Me otutu Billionaires mebere
Soro ihe karịrị nde 160 ụmụ akwụkwọ
O di na ala 130 na asusu 75
#Wa # 1 Mbara Igwe Mbara Igwe
Debanye aha na Mbara Igwe
Ogige Udo 240
Mụọ ihe n ’Intanet maọbụ Onsite n’ebe ị na-adọ aka na nso ya
World # 1 Online Robot Agụmakwụkwọ
Debanye aha na Usoro Robotics
Ndị nkuzi ọtụtụ Billionaire
Ndị Trott Bailey Ezinụ na-azụ ọzụzụ
Mụọ otu esi etinye igwe n’uche na nzuzo
RELỌ :BỌCHP: PBỌRP N’ELLỌ NCHE
robotics, Usoro Robotics
Intro na Robotics
robotics, Ngwaahịa Robotics
Super Starter Gbanyụọ-Grid Solar 3.3kW Kit
AKW LEKWỌ EGO Mee ngwa ahịa gị NA ANY. Taa Lee Ọnọdụ> EGO NA-EGO
snap AKPARỊTA PRODUbụ onye na-emepụta ihe ekwesịghị ịdị egwu ọnụ ọgụgụ na AK TIMEKỌ EGO! Anyị kachasị elu Ngwugwu nkuzi AK CKỌ EGO>
N'ime akụkụ nke usoro a site na Nzọụkwụ Solar mere Mahadum Trot Bailey kwere omume, Kimroy Bailey na-enye ndị… GỤKWUO
Anyị Global Energy Vision an nwere ikuku? Nwere ike ịzụta ya? Ọ na-ada naanị mba ahọrọ? ... GỤKWUO
MultiBillionaires keere Chukwu Chukwu maka Kimroy Bailey
https://vimeo.com/415009747 The Kimroy Bailey Group is disrupting many business models and ideologies about business in the 21rst century. Firstly, the... GỤKWUO
Anyanwụ ike ka bụụrụ ọtụtụ mmadụ echiche ọhụrụ. Onye ahia nwere ike inwe otutu ajuju ... GỤKWUO
Mgbe m malitere azụmahịa ntinye nke anyanwụ m na Kimroy Bailey Renewables ọ dị m ka ya bụrụ na m nwere ndepụta nke ihe ... GỤKWUO
Yabụ ị nwere echiche dị ebube maka ime ezigbo ego site na ụlọ ọrụ igwe ojii nke ijeri ijeri dọla ijeri ma ị… GỤKWUO
N'ime afọ ise nke anwụala anwụrụala nke anwụ anwụala m na njem m gaa… GỤKWUO